United Nations Supports Frontline Healthcare Workers and Communities to Protect Themselves Against COVID-19 | United Nations in Myanmar
ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်ရေး ရှေ့တန်းမှဆောင်ရွက်နေသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအား ကူးစက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂက ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာတွင် အဓိကဦးစားပေးကိစ္စရပ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် ရှေ့တန်းမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေမှုများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိပါသည်။
ဗြိတိန်၊ ဆွီဒင်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆွစ်ဇာလန်တို့မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပြီး ကုလသမဂ္ဂ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး (UNOPS) မှ စီမံခန့်ခွဲပေးသည့် Access to Health Fund သည် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန (MoHS)၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးသူများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမှုအဖွဲ့အစည်းများထံ တစ်ကိုယ်ရေသုံးရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ (PPE) များ ပံ့ပိုးပေး လျက်ရှိပါသည်။ ရှေ့တန်းမှဆောင်ရွက်နေကြသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးလက်အိတ် ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် ခွဲစိတ် ခန်းသုံး ပါးစပ်/နှာခေါင်းစည်း ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို ဧပြီလတွင် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ PPE ဝတ်စုံပေါင်း ၂,၀၀၀ (လူ ၂၀၀၀ အတွက် တစ်ရက်စာ) ကို MoHS ထံသို့ မကြာမီ ထပ်ဆောင်းပေးအပ်သွားရန်လည်း ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် UNOPS ၏ Access to Health Fund သည် MoHS နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဝတ်ရုံ (coveralls) ပေါင်း အနည်းဆုံး ၅၀,၀၀၀ ကို မေလလယ်တွင် ပံ့ပိုးပေးသွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။
သြစတြေးလျ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဂျာမနီ၊ ဖင်လန်၊ ဆွီဒင်နှင့် အီတလီမှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးသည့် ‘အမျိုးသမီး များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား ဦးစားပေးပါ’ (WGF) အစီအစဉ်နှင့် Access to Health Fund တို့၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNFPA) ကလည်း ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ပါးစပ်/နှာခေါင်း စည်း ၁၂,၀၀၀၊ လက်သန့်စင်ဆေးရည်၊ မျက်နှာကာနှင့် PPE ဝတ်စုံများကို နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ မိခင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဌာနခွဲသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များရှိ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန များသို့လည်း PPE kit စုစုပေါင်း ၁,၅၀၀ ကို ပေးအပ်လှူဒါန်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
UNFPA သည် MoHS အား ကျန်းမာရေးစနစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိပြီး လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေး ဝန်ဆောင်မှု များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သားဖွားဆရာမများအား PPE kit ၃,၀၀၀ ထပ်မံ ပံ့ပိုးပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ သားဖွားဆရာမများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားနေသည့် အခြေအနေတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို မည်သို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် ပေးရမည် ဟူသည့် သင်တန်းအရင်းအမြစ်များရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့်အပြင် ယခုကဲ့သို့ PPE များ ပံ့ပိုးမှုကို ပထမအဆင့်အဖြစ် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို တန်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဆောလျင်စွာ တုံ့ပြန်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးရန် ရည်ရွယ်လျက် UN Women သည် Finn Church Aid Consortium (FCAC) နှင့် ပူးပေါင်း၍ အမျိုး သမီးများအား ၎င်းတို့၏ သက်မွေးမှုလုပ်ငန်းများအဖြစ် ပါးစပ်/နှာခေါင်းစည်း ချုပ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း များအား ကူးပြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးနေပါသည်။ FCAC သည် အမျိုးသမီးများအား MoHS မှ ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်သားဖြင့် ပိတ်နှာခေါင်းစည်းများ ချုပ်လုပ်ရန် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တွေနှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များတွင် အမျိုးသမီး ၂၅ ဦးကို သင်တန်းပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ချုပ်လုပ်သူများသည် တစ်ပတ်လျှင် နှာခေါင်းစည်း ၁၅၀၀-၂၀၀၀ ချုပ်လုပ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ချုပ်လုပ်ထားသော နှာခေါင်းစည်းများကို ပထမအသုတ်အဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အဖွဲ့ အစည်းများထံ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် စစ်တွေရှိ အသွားအလာကန့်သတ် စောင့်ကြည့်နေသည့် နေရာများမှ လူများနှင့် ထိုနေရာများကို စီမံခန့်ခွဲပေးနေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများထံ ပေးဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပြည်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ကြိုတင်ပြင် ဆင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားရန် အခိုင်အမာသန္နိဋ္ဌာန်ချ ထားပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂသည် ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှု အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အစီအစဉ်များပြန်လည်ရေးဆွဲ၍ ကိုဗစ်-၁၉ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Aye Win is the National Information Officer at UN Information Centre Yangon and the RCO. He obtainedaMasters degree in Linguistics and English asaForeign Language from the Institute of Education in Yangon. He worked for three years at the Industrial Training Centre at Sinde, Myanmar and joined the German Embassy asaPublic Information Assistant where he worked for ten years. He joined the UN Information Centre in 1995.